Rita, Writing for My Sake!: Haze & the Authors
အိပ်မက်ခိုက်မှာ မီးခိုးနဲ့ ကြပ်တိုက်ချင်တိုက်ပစေ ဒီညကို ငါ အပြတ်ဖိုက်မယ်။ (တာရာမင်းဝေ)
အို 321 psi ဟုတ်လား။ ဘုရားရေ ကျွန်မ မီးခိုးငွေ့တွေ မွှန်လိုက်တာ။ (ဂျူး)
တနေ့သ၌ ကျွန်ုပ်သည် စင်ဂါပူရဟု အမည်ရသော ခြင်္သေ့ကျွန်းငယ်သို့ လည်ပတ်အပန်းဖြေရန်အလို့ငှာ ရောက်ရှိသွားလေရာ လွန်စွာမှ ထူထပ်အုံ့ဆိုင်းသော မီးခိုးမှိုင်းများ ဖုံးလွှမ်းနေသည်နှင့် ကြုံရလေ၏။ (မင်းသိင်္ခ)
မီးခိုးဆိုသည်မှာ ရှို့ချင်သလို ရှို့ သွားချင်သလို သွားလေရကား ကျွန်တော်ကရော ဘာများတတ်နိုင်ပါဦးမည်နည်း။ (ဗန်းမော်တင်အောင်)
လွယ်သလား ခက်သလား ရာမ၊ ပြောစမ်း လွယ်သလား ခက်သလား။ နိုင်ငံခြားမှာ ပိုက်ဆံရှာချင်တဲ့ကောင်ဆိုတာ ဟောဒီလို မီးခိုးငွေ့တွေကို အပြုံးမပျက် ရှူနိုင်ရတယ်ကွ။
(ဗိုလ်အောင်ဒင် - ရွှေဒုံးဘီအောင်)
ရှင့်အပေါ်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ချစ်ခြင်းတွေက မီးခိုးမှိုင်းတွေလို အံကျလာလို့ ကျွန်မရဲ့ ပြင်းထန်ပြတ်သားလှတဲ့ မာနတရားတွေတောင် စင်ကာပူအလား ခပ်ဝါးဝါး ဖြစ်ကုန်ရပါတယ် မောင်ရယ်။ (လွန်းထားထား)
မီးခိုးငွေ့တန်းကြီးသည် ခင့်ကိုလှောင်နေသည် ကုန်မှာလားခင်ဟုမေးနေသယောင်ရှိသည် . မောင် ဖနောင့်နင့်ပေါက်လဲ ပေါက်စေတော့ မီးခိုးမမွှန်ခင် ချစ်ကြောင်းတော့ပြောရမည်.။ သေငှေးခင်သည် ပိုက်ဆံမလောက်နိုင်.သောကြောင့် မီးခိုးကုန်ကုန် မကုန်ကုန် မနက်ဖြန်အလုပ်ကေ့ငျေက်ေရမည်။ (ဘာရေးမိပါခမ်လိမ့်) (KOM)
အင်ဒိုမှ မီးခိုးငွေ့များကလည်း တနွဲ့နွဲ့ နော့ဆဲကို (ဒဂုန်တာရာ)
Posted by Rita at 6/19/2013 11:50:00 PM
မိုက်တယ် မရီတာ...သငှေးခင်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲး)....
ရေးတတ်လိုက်တာ ညီမရယ်. တို့ မမခင်ဦးမေကလဲ best seller ပဲနော့
ဘလော့က စာ ခုမှ မြင်တယ် ... ကြည်အေး တို့ ဗန်ေးမ်ာတင်အောင်တို့ အသစ်ထည့်ထားတာကိုး
စာတွေ ဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့်ဝိညာဏ်ထဲ ပူးဝင်နေတတ်တဲ့ စာရေးသူရဲ့ စတိုင်ကို အမိအရ ဖမ်းဆုတ်ပြီး၊ ပြန်အန်ချနိုင်တယ် ရီတာ တော်လိုက်တာ
ရေးတတ်လိုက်တာ ရီတာ ရယ် .... ။ မသီတာပြောသလိုပဲ စာရေးသူတွေရဲ့ စတိုင်ကို အမိဖမ်းနိုင်တာ ... တကယ်ချီးကျူးပါတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ လင့်ခ်ထားတာ တွေ့လို့ ခုမှ လာဖတ်ဖြစ်တာ။ စလုံးက မီးခိုးမှိုင်းအကြောင်း ရေးကြတဲ့ သူတွေထဲမှာ ဒီပို့စ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ :)